Loza an-dranomasina :: Rangahy latsaka teny ambony lakana • AoRaha
Loza an-dranomasina Rangahy latsaka teny ambony lakana
Karohina any anaty ranomasina, hatramin’ny omaly, ny rangahy iray, dimy amby dimampolo taona, latsaka avy teny ambony lakana tany amin’ny ranomasina anelanelan’i Solala sy Besalampy, tamin’ny alahady maraina be.
Nampandrenesina ny mponina amin’ny tanàna sy kaominina manodidina hanampy amin’ny fikarohana. Heverina ho resintory teny ambony lakana io lehilahy io ka izany no nampilatsaka azy tany anaty rano. Nieren-doza rahateo ny olona niaraka taminy.
Avy any Mahajanga ity lakana lehibe iray nitondra olona vitsivitsy tra-doza ity. Mbola teny ambony ranomasina izy ireo, ny alahady hatramin’ny roa ora maraina. Rendriky ny torimaso ny olona tao anaty lakana. Tsy hita ny lehilahy lehibe iray.
Zava-mahadomelina :: Lehilahy nahatrarana rongony 16 gony